Raha mbola misy koa ny fanantenana ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
« Tsy navelanao ho lo tao am-pasana ilay naterakao. Satria, fanantenana no ambaran’ny fasana ». Raha mandinika ny vaninandro iainantsika ankehitriny dia toa maizina ny andro : mafy ny hain-tan, nanjeky ny kere ary nampitsoa-ponenana olona maro, tsy ampy ny rotsak’orana ary dia tsy misy antenaina ny voly nisasarana, hitohy lavareny indray ny fahavaratra na ny fahasahiranana ho an’ny fianakaviana maro. Ny tantsaha niandry ny vokatra mba hanamaivana ny fahasahiranana, zara raha nampiakatra vokatra ny maro. Hanao ahoana ny taona ? Manampy trotraka ny valan’aretina tsy misy fitsaharany fa mifofo ny aina aza, efa ho herintaona izao. Ny gazetintsika dia niara-nilentika tamin’iny fihibohona lavareny iny.
Anaty firohotan’ny valanaretina faharoa indray izy ity no indro miezaka mitondra fanantenana sy maso vao ho an’ny besinimaro. Nampikaikaika ny fepetra napetraky ny fanjakana fony vao nanomboka iny valanaretina iny. Izay vokatra kely avy any ambanivohitra any aza dia niharan’ny sakana raha vao nandia fizaram-paritra. Teto afovoan-tany dia nihatra tokoa ny tsy nandia faritany satria renirano kely etsy Ambodisaha dia tsy hay dikaina ho an’Itasy sy Analamanga. Toa tsy Imerina intsony ny mamoladahy. Toy izany, i Vakinankaratra sy Analamanga. I Mangoro sy Analamanga, i Betsiboka sy i Soafia…vakivaky ny firenena ary niefitrefitra ny fiarahamonina.
Ankehitriny, manao be fihavy ny COVID-19, miverina indray ny filaharambe etsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka, rakotra olona ny fivarotam-panafody samihafa. « Efa tsy maintsy iainana ity aretinaity e ». Saingy re ombieny ombieny ny hoe « Cas grave hono, haingana be hono e, izay rehetra maty toa Covid avokoa. Ny vaksiny tsy maharo nefa koa tsy hanasitrana… ». Inona ihany àry ity aretina ity.
Etsy anilan’ireny dia toa zary mitazam-potsiny sisa ny fanjakana. Tsy re intsony ilay « tsena mora, vatsy tsinjo, tosika fameno ». Fitakiana etsy sy eroa no re tao ho ao : vatsim-pianarana nivangongo, tambin-karama tsy voaefa, vidin-jiro tsy mazava, rano tapaka andro aman’alina…. Vanim-potoana sarotra no sedrain’ny firenena. Ary mila herim-po sy finiavana in-jato heny amin’ny rehetra.
Manoloana izany no mitsangana ny Lakroan’i Madagasikara. Tsy ilay fahoriana sy fijaliana teny Kalvery, fa be ny kalvery diavintsika isan’andro, fa ilay Lakroan’i Fanantenana satria « manambara fitsanganan-ko velona ny fahafatesana ary mirakitra fanantenan’ny fiainana ny fijaliana. « Ao anatin’ny mangidy no misy ny mamy », hoy ny Ntaolo. Tsy fankaherezana manodoka, fa ilay fahendrena manefy toe-panahy sy herim-po hitraka, raha mbola misy koa ny fanantenana. Fa ambadiky ny alina maizina ny mazava, mandimby ny raho-mitatao, ilay masoandro be lohataona. Avy amin’ny fahafatesana ny fiainana, satria i Kristy no masoandron’ny fiainana, izay mino no mandeha amin’izany fanantenana izan. Matanjaka satria feno herim-pitia. Mavitrika satria vonton’ny herim-pahasoavana manentana. Dia tsy maintsy ho lasa ny zavatra taloha, fa nohavaozin’i Kristy ny fiainana. Mino izany ve isika ?